MSF OO XIREYSA MASHRUUCEEDA CAAFIMAAD EE UGU WEYN MUQDISHO DILKII SHAQAALAHEEDA KA DIB - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
19.01.2012 | Dhacdooyinka, Qeybta Guud, War-Saxaafadeed
19ka January 2012 – Ka dib markii ay dheceen dilalkii naxdinta lahaa ee Muqdisho loogu geystay asxaabteena Philippe Havet iyo Dr. Karel Keiluhuo 29 ka bishii December 2011, MSF waxaa ay ku qasbantahay in ay joojisa howlaha ay ka wada mashruucaas
Joojinta adeegyada ay MSF ka bixin jirtay degmadan waxaa ay nus ka dhigeysaa adeegyada guud ee hay’adda ay ka bixisa magaalada Muqdisho. Haatan, mashaariicda MSF waxaa ay sii wadayaan adeegyada caafimaad oo ay ka bixiyaan degmooyinka Muqdisho, iyo 10 goobood oo kale ee dalka ka tirsan.
Laakiin si ay u sii socdaan howlahaas madaxa banaan ee MSF waa in la ixtiraama shaqaalaha, bukaanka, dhismayaasha iyo qalabka. Haddii shuruudahaas la hela, MSF waxaa ay isku xilqaameysaa in ay howlaheeda Soomaaliya sii wadato.
“Wey adagtahay in aad meel ka baxdid iyadoo howlihii aad ka waday ay ahaayeen kuwa naf lagu badbaadiyo maalin walba,” ayuu yiri Christopher Stokes, agaasimaha guud ee MSF, “laakiin dilkii arxan darada ahaa ee asxaabteena loo geystay ayaa noo suura galineynin in aan kasii shaqeyna mashruucan” intaa ayuu ku daray.
Mashruucaan waxaa ka mid ahaa xarun caafimaad oo ay yaalaan 120 sariirood oo lagu daaweeyo daacuunka ee degmada Hodan, isbitaal leh 120 sariirood oo lagu daaweeyo bukaanka jadeecada iyo nafaqa darada ee degmada Wadajir oo xafiiska guud uu ku yaalay. Xaruma caafimaad oo aan joogtada ahayn oo lagu bixin jiray talaalka jadeecada, daweynta nafaqa darada, oo la gaarsiin jiray kumanaan qof oo ku nool degmooyinka Hodan, Wadajir iyo Waaberi ayaa iyagana la joojinayaa dhamaatka bishan.
Mashruucaan MSF waxaa ay ku caawineysay 200,000 qof oo Soomaali ah oo kusoo cararay caasimadda bilihii aan soo dhaafnay. Tan iyo bishii August 2011, waxaa la daaweeyey ilaa 11, 787 caruur ah oo nafaqa dara la il dranaa, 1,232 bukaan ah waxaa laga daaweyey shuban iyo 861 kale oo laga daaweeyey jadeeco. Kooxaha MSF waxaa ay 67,228 caruur ah ka talaaleen jadeeco.
MSF waxaa ay si tartiib ah u yareeyn doontaa howlaha ay ka qabato degmada Hodan iyadoo la socota xaaladda, si gaar ahna ugu
dadaaleysa gudbinta bukaanka haatan hela xanaaneyta iyo adeegeena. Sidaa darteed, MSF waxaa ay bulshada ka codsaneysaa in ay si fiican ula shaqeyso si howshan ay u qabsoonto iyadoon wax carqaladeyn ah dhicin lana xifdinaayo dhismaha xarumaha caafimaad ee ku yaala Hodan iyo Wadajir.
MSF waxaa ay dhammaan madaxda maamulada iyo shacabka Soomaaliyeed ka codsaneysaa in ay ka qeyb qaataan dadaalda siidaynta lahaystayaasha Montserrat Serra and Blanca Thiebaut, oo laga afduubay xerada qaxootiga ee Dhadhaab bishii October, sanadkii hore iyagoo ku howlan mashruuc xaald degdeg ah oo lagu caawinaayey Soomaalida ku nool halkaas.
MSF waxaa ay si joogta ah uga shaqeyneysey Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991 iyadoo haatanna ay dalka ka wado 13 mashruuc oo ay ka mid yihiin, barnaamijyada caafimaad ee degdegga oo haatan socda, ololaha talaalka iyo adeegga nafaqeynta. MSF waxaa sidoo kale ay caawisaa qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Kiinya iyo Dolow Ado, Itoobiya.
Tags: Banadir, dadaab, Mogadishu, MSF, MSF Staff abducted, Somali refugees, South Central Somalia, Staff killed